Duqa Muqdisho oo ka war bixiyey khasaaraha qaraxii ka dhacay Muqdisho – Hornafrik Media Network
Duqa Muqdisho oo ka war bixiyey khasaaraha qaraxii ka dhacay Muqdisho
Guddoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Filish oo gaaray isgoyska Ex-Koontarool Afgooye oo saakay uu ka dhacay qarax is-miidaamin ah ayaa warbaahinta faah-faahin hor dhac ah ka siiyey khasaaraha ka dhashay qaraxaas.
Cumar Filish ayaa sheegay in qaraxaasi uu geystay khasaare aad u badan, isla markaana aan wali la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaas, isagoo si hor dhac ah u sheegay in dhaawacu uu kor u dhaafayo 90 qof.
Guddoomiyaha oo ay garab taagnaayeen Taliyaha booliska iyo ku xigeenkiisa amniga iyo siyaasadda ayaa sheegay in qaraxaas oo ahaa is-miidaamin loo adeegsaday gaari xamuul ah, isagoo xusay in halkaas uu ka dhashay khasaare aad u badan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Dadka wax yeeladda ugu badan ay ka soo gaartay qaraxaas ayuu sheegay inay ahaayeen shacab u badnaa arday la socotay Bus ay laheyd Jaamacadda Banaadir, sidoo kale dadka dhintay waxaa ku jira ajaanib la sheegay inay u dhasheen dalka Turkiga iyo askar ilaalo u aheyd, kuwaas oo la sheegay inuu ahaa bartilmaameedka qaraxaas.
Ugu dambeyn wuxuu carabka ku dhuftay in ismiidaamiyaha uu damacsanaa inuu gudaha u soo galo magaalada Muqdisho, balse ay ka hortageen ciidamada ammaanka.
Shacab, askar iyo ajaanib ku dhintay qaraxii ka dhacay Muqdisho iyo Cumar Filish oo ka war bixiyey
Agaasimaha isbitaalka Madiina oo sheegay in lasoo gaarsiiyey dhimashada 73 qof iyo dhaawaca 52 kale